कसरी हाम्रो सजिलो-उपयोग वरिष्ठ वरिष्ठ फोन फोन काम गर्दछ - Konnekt
कसरी यो काम
Konnekt भिडियोफोन सेटअप र कुनै पनी परिवर्तनहरू सहित पूर्ण सेवा प्रदान गर्दछ, ताकि तपाईं प्राविधिकताको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
त्यसो भए तपाई JUST गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिका बोलाउनुहोस् र हामी यसलाई पूरा गर्नेछौं।
वा प्रणाली कसरी काम गर्छ, र तपाइँ एक अर्डर गरे पछि के हुन्छ बुझ्ने एउटा पढ्न को लागी पढ्नुहोस्।
यो Konnekt भिडिओफोनले सम्भव सरल इन्टरफेसको माध्यमबाट परिवार र साथीहरूसँग अनुहार सम्पर्क गर्न सक्षम गर्दछ: वन टच टु डियल। यसको लागि कुनै कम्प्युटर हुन सकेको छैन। त्यहाँ कुनै मेनू छैन, कुनै पासवर्ड छैन, कुनै काल्पनिक विकल्पहरू छैनन्।
औंला, सूचक, वा कुनै वस्तुको बारेमा प्रयोग गरेर तपाई हाम्रो नाम 15 इन्च ईन्च स्क्रीनमा कल गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने नाम मात्र ट्याप गर्नुहोस्, र भिडियोफोनले स्काईप मार्फत कल सुरु गर्दछ।
आगमन कलहरू समान सरल छन्, र स्वचालित रूपमा अधिकृत प्रयोगकर्ताहरूको लागि जवाफ दिन सकिन्छ।
भिडियो कल फोन कलिंगको लागि निर्मित उद्देश्य हो। यो स्थायी रूपमा छोड्न सकिन्छ, र एक वास्तविक इंटेल सीपीयू र अन्य सावधानीपूर्वक चयन गरिएका कम्पोनेन्टहरू समावेश गर्दछ, विश्वसनीयता र भिडियो कल प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न।
टेलिफोन प्रयोग गर्न संघर्ष गर्न, वा कुनै पनि कारणका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न असमर्थ: विडिओफोन उनीहरूको लागि आदर्श हो: कमजोर आँखाले देख्ने क्षमता वा सुन्ने क्षमता, हडबडी हातले चाल, अस्थिरता, वा डिमेन्शिया जस्ता संज्ञानात्मक मुद्दाहरू। भिडिओफोनले हाम्रा ग्राहकहरुलाई डिजिटल सञ्चार युगमा भाग लिनको लागि सक्षम बनाउँदछ, बिना कडा र जटिल उपकरणहरू बुझ्नु। यसले उनीहरूलाई घरमा थोरै लामो समय सम्म रहन मद्दत गर्दछ, वा आवासीय हेरचाहमा संक्रमणलाई सजिलो बनाउँदछ। यसले स्वतन्त्रता कायम राख्न मद्दत गर्दछ, सामाजिक अलगाव कम गर्दछ र प्रियजनहरूसँग दृश्य सम्पर्क बढाउँदछ।
अधिक जानकारीका लागि तल तल हेर्नुहोस् भिडिओफोन प्रयोग गर्दै
कसरी गर्ने आदेश
तपाईं अर्डर पछि
सेटअप सरल छ
भिडिओफोन प्रयोग गर्दै
तपाईंलाई अन्त्यमा के चाहिन्छ
असीमित कलहरू - निश्चित मासिक लागत
हामीलाई कल or एक जांच पठाउनुहोस्
हाम्रा धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरू -80०-१०104 बर्ष उमेरका छन्, वा सुन्ने श्रवण वा दर्शन, हल्लिएका हातहरू, वा डिमेन्शिया छन्, वा असक्षम छन्, वा ओछ्यानमा चल्दा / कुर्सी बाध्य छन्। हामी वास्तवमै तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्छौं, वा ईमेल / स्काईप मार्फत थोरै जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छौं, ताकि हामी तपाईंको विशेष आवश्यकताहरू ठीकसँग बुझ्न सकौं, र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि हामी सही विकल्पहरू छनौट गर्दछौं। हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि भिडियोफोन तपाई र तपाईंको परिवारको लागि ठूलो लाभ हो! हामी तपाईको कल लागतहरु बचाउन संसारको कुनै पनि ठाउँमा कल गर्नेछौं। तपाईं त्यसपछि फोनमा साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ, वा हामी तपाईंलाई एक आवेदन पठाउन सक्छौं।
तपाईंले खरीद, भाँडा वा ट्रायलको लागि तपाईंको अर्डर गरेपछि, Konnekt निजीकृत र तपाईंको भिडियोफोन परीक्षण। तपाईंले हामीलाई कल बटनमा जानका लागि नामहरू प्रदान गर्नुभयो, र हामी बाँकी कामहरू गर्छौं! हामी प्रत्येक परिवारका सदस्य र साथीलाई सम्पर्क गर्दछौं, उनीहरू विश्वमा कहाँ छन्, उनीहरूलाई स्काइपको साथ सेटअप हुन र जडान गर्न मद्दतको लागि। जबकि अधिक सम्पर्कहरू पछि थप्न सकिन्छ, हामी पहिलो व्यक्तिहरूसँग टेस्ट कलहरू संचालन गर्छौं, तिनीहरूको कलको गुणस्तरलाई अप्टिमाइज गर्दछौं, र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि भिडियोफोनले काम गरिरहेको सम्पर्कहरूको सेटको साथ पठाएको छ। हामीसँग अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, युरोप र एशिया सहित विश्वव्यापी साझेदार / पुनर्विक्रेताहरू छन्।
भिडियोफोनलाई या त निश्चित इन्टर्नेट, वाइफाइ वा सेलुलर / मोबाइल इन्टरनेटको काम गर्न आवश्यक पर्दछ। स्काईप शानदार छ र ढिलो ईन्टरनेट सेवामा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। जे होस्, हामी कम्तिमा २ / ०. M एमबीपीएस डाउनलिंक / अपलिink्क गति (ओठ पढ्नका लागि २/२ एमबीपीएस) सिफारिस गर्दछौं। डेटा प्रयोग% ०% को लागी प्रतिमाह GB जीबी मुनि छ जो प्रति दिन एक घण्टा भन्दा कम भिडियो कल गर्छ, तर चरम प्रयोगकर्ताहरु को लागी month० जीबी प्रति महिना सम्म जो सारा दिन आमने सामने कुरा गर्न मन पराउँछन्।
Konnekt विश्वव्यापी ईन्टरनेटको साथ मद्दत गर्न सक्छ, एक विश्वसनीय Wi-Fi मोडेम राउटर सिफारिश वा आपूर्ति, र तपाइँको प्राविधिक प्रश्नहरूको उत्तर। हामी परिवार र साथीहरूको लागि आईटी समर्थन पनि प्रदान गर्दछौं।
सेटअप प्राय: केही मिनेटमा पूरा हुन्छ। भिडीफोनलाई इन्टरनेटमा जडान गर्न, वाइफाइ वा ल्यान केबल मार्फत, धेरै सजिलो छ। यदि तपाईं हामीलाई पहिले नै तपाईंको Wi-Fi नेटवर्क नाम र पासवर्ड बताउन सक्षम हुनुहुन्छ भने, हामी भिडीफोनलाई यसलाई स्वचालित रूपमा जडान गर्नको लागि कन्फिगर गर्नेछौं। अब गर्नलाई छैन!
भिडियोफोन सेट अप सजिलो छ।
अनबक्स, प्लग इन, र जानुहोस्।
धेरै ग्राहकहरु "मनपर्ने कुर्सी" को छेउमा एक कम टेबलमा भिडियोफोन राख्छन्। साधारण रूपमा किकस्ट्यान्ड फ्यान्ड गर्नुहोस् र यसलाई हाम्रो मजबूत फर्नीचर-मैत्री टेप प्रयोग गरेर टेबलमा सुरक्षित गर्नुहोस्। वाल-माउन्ट कोष्ठकहरू र अन्य स्थापना विकल्प ओछ्यानमा वा कुर्सी-बाउन्ड प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि उपलब्ध छन्।
तपाईको दिमागलाई शान्तिमय बनाउनको लागि, हाम्रो प्राविधिक टोली मध्ये एक फोनमा तपाईं वा तपाईंको नामित सम्पर्क सेटअपको बखत हुनेछ। यसले तपाईंलाई भिडीयोफोन सेटअप गर्न अनुमति दिन्छ बिभिन्न राज्य वा देशमा आफैं त्यहाँ हुनु बिना।
औंला, कृत्रिम, वा कुनै चीजको बारेमा प्रयोग गरेर तपाईले कल गर्न चाहानु भएको नाम मात्र ट्याप गर्नुहोस्, र भिडियोफोनले स्काईप मार्फत कल सुरु गर्दछ।
आगमन कलहरूलाई जवाफ दिने समान रूपले सरल छ, र अधिकृत कलरहरूबाट कलहरू हुन सक्छन् स्वतः जवाफ दिइयो यदि भिडीफोन प्रयोगकर्ता कुनै कारणका लागि जवाफ दिन असमर्थ छ (उदाहरणका लागि यदि उनीहरूको पतन भयो भने)। यसको मतलब तपाईं घर हेर्नुहोस्, के भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, र कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र आपतकालमा सान्त्वना प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ जब मद्दतको व्यवस्था गरिएको छ।
कलको बखत, भिडियोफोन प्रयोगकर्ता नजिकै बस्न सक्दछ, वा केही मिटर टाढा आफ्नो मनपर्ने कुर्सीमा, र सामान्य आवाजमा कुरा गर्न सक्छ - अत्यन्त संवेदनशील स्वत: समायोजन माइक्रोफोन, धेरै लाउड स्पिकरहरू, र अन्य सावधानीपूर्वक चयन गरिएका अवयवहरूलाई धन्यवाद।
परिवार र साथीहरूले निःशुल्क प्रयोग गर्छन् स्काइप एप, जुन कुनै पनि उपकरणको बारे मा स्थापना गर्न सकिन्छ: एन्ड्रोइड फोन, आईफोन, विन्डोज फोन, आईप्याड, पीसी वा म्याक। हामी परिवारका सदस्यहरू र साथीहरूलाई सम्पर्क गर्दछौं उनीहरूलाई स्काइपको साथ सेटअप हुन मद्दत गर्नका लागि, उनीहरू संसारमा जहाँसुकै भए पनि।
नजिकका परिवार वा हेरचाहकर्ताहरू, जो उनीहरू प्रायः भ्रमण गर्न असमर्थ हुन्छन् वा उनीहरूको कलको जवाफ नदिएमा चिन्ता गर्दछ, भिडीफोनले मानसिक शान्ति प्रदान गर्दछ। कुनै पनि उपकरणबाट आमनेसामने कुरा गर्न सक्ने क्षमता भनेको तपाईको स्थानको पर्वाह नगरी तपाई कुनै पनि समय स्वास्थ्य र खुशीमा नेत्रहीन जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लगइन प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो आईप्याडमा स्काईप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं घरमा हुनुहुन्छ, तपाईंको पीसी काममा छ, र तपाईंको मोबाइल फोन यो अनलाइन जहाँ भए पनि। तपाईं टाढा हुँदा, नि: शुल्क होटल / रेस्टुरेन्ट वाइफाइ, वा तपाईंको सेलुलर मोबाइल जडान प्रयोग गरेर भिजुअल सम्पर्कमा राख्नुहोस्। यो अविश्वसनीय सजिलो छ, र Konnekt कसरी देखाउने।
भिडीफोनले पनि टेलिफोन (अडियो मात्र) र अन्य कल गर्दछ Konnekt भिडियोफोन्स। बुढेसकालका साथीहरू, मेडिकल स्टाफ र सेवा प्रदायकहरू अझै पनि भिडियोफोनबाट कल गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, यदि तपाईं स्काईपमा जवाफ दिनुहुन्न भने, हामी तपाईंको ल्यान्डलाइनलाई जगेडाको रूपमा कल गर्न भिडियोफोन सेटअप गर्न सक्दछौं।
Konnekt पूर्ण चलिरहेको सेवा प्रदान गर्दछ। हामी भिडियोफोनमा कुनै पनि भविष्य परिवर्तनहरूको ख्याल राख्छौं प्राथमिकताहरू र सम्पर्कहरू, त्यसैले तपाईंसँग छैन। नयाँ नाम थप्न आवश्यक छ? वा सम्पर्क हटाउने हो? भोल्यूम बढाउने वा पाठ ठूलो बनाउन आवश्यक छ? सबै यसले लिने संक्षिप्त फोन कल वा ईमेल हो Konnekt। हामीलाई च्याट गर्नुहोस् वा हामीलाई स्काईप मार्फत नि: शुल्क कल गर्नुहोस्, तपाईं संसारमा भए पनि फरक पर्दैन।
हामी पर्दा पछाडि भिडियोफोन र भिडियो कलिंग सफ्टवेयर अपडेटहरू पनि हेर्छौं, जसले गर्दा भिडियोफोन प्रयोगकर्ताले अपडेट प्रम्प्टहरू वा टेक्निकल सन्देशहरू देख्दैन।
एक कम, निश्चित मासिक शुल्क बाट Konnekt असीमित फेस-टु-फेस कलहरू, र टेलिफोनमा असीमित कलहरू समावेश गर्दछ * - विशिष्ट देशहरूको जानकारीको लागि हामीसँग कुरा गर्नुहोस्।
हाम्रो भिडियोफोन प्रयोगकर्ता टाढाका आफन्तहरूलाई हेर्न सक्षम छन् जुन उनीहरूले कलको लागतको बारेमा चिन्ता नगरिकन उनीहरूले फेरि कहिल्यै देख्न सक्दैनन्। तिनीहरू आफन्त र साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्छन् जो अन्तरराज्यीय वा फरक देशमा बस्छन्, उनीहरूलाइ जतिसुकै मनपर्दछ, नामको ट्याप बाहेक अरू केहि पनि छैन। बुढेसकालका वयस्कहरूले आफ्ना नातिनातिनाहरू हुर्काउन सक्छन्, नाममा फोटो सहित-इन्च कल कल बटनमा ट्याप गरेर। यो डिजिटल टेक्नोलोजी यसको सब भन्दा राम्रो हो, बिल शक्सको डर बिना मानिसहरूलाई एकै साथ ल्याउने।
थप भिडियोहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
भिडियोफोन सुविधाहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
भिडियो र फोन
ठूलो टच स्क्रीन
एक पृष्ठ विशेषता सारांश
यसले कसरी वयस्कहरूलाई सहयोग गर्दछ?
Konnekt भिडिओफोन प्रयोग गर्नको लागि अविश्वसनीय सरल छ, जो ट्याब्लेट वा एक फोनको साथ संघर्ष गर्न सक्नेको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो तिनीहरूको सुनौलो वर्षमा उनीहरूलाई पूरा गर्दछ जुन फोनको ठूलो, ठूलो, अनावश्यक कलरहरूलाई अनुमति दिँदैन, र कुनै पनि प्रबन्धको आवश्यक पर्दैन। छोराहरू र छोरीहरू विशेष गरी विश्वस्त कलरहरूका लागि स्वचालित उत्तर मन पराउँछन्। हेर्नुहोस् वरिष्ठ आवेदन।